Penthouse flat Neratovice - I-Airbnb
Penthouse flat Neratovice
Neratovice, Central Bohemian Region, Czechia
Ifulethi elitofotofo kwisixeko saseNeratovice. Imizuzu emi-5 ukusuka kwisikhululo sebhasi. Imizuzu engama-30 ukuya ePrague, ndikwabonelela ngokuthathwa kwesikhululo seenqwelomoya. Gqibezela ubumfihlo. Ifulethi ngaphandle komnini. Kufuphi kukho iNtlambo yaseKokorin efanelekileyo kwiihambo. Indawo yokupaka iyafumaneka. Uya kubonisa iPrague kwimeko yomdla. Ndithetha ispanish.
I-Apartment ngaphandle komnini, ilungele amaqela amakhulu okanye iintsapho ezinabantwana. Kufuphi kukho iNtlambo yaseKokorin efanelekileyo kwiihambo. Indawo yokupaka ekhoyo, indawo yokuhlala ine-200 m2.
55" HDTV ene-intambo yepremiyamu, I-Netflix, I-HBO Max
Kokořínský důl, Mělník, ukudibana kwe-Elbe kunye neVltava, iBar Mlékojedy phezu kwesanti, umgama omfutshane ukusuka ePrague, Houska Castle. Eyona confectionery igqwesileyo eMělník Cake Art, eyona Hmburgry kunye nebhiya: Mělník Němý Medvěd yokutyela - amava. I-Mirakulum Children's Park kunye nohambo olutsha luchazwe kwifulethi kwiincwadi - uhambo kunye nabantwana, njl.
kunye ne-telefonu nonstop přes sms nebo whatsapp
Iilwimi: Čeština, Español